Muxuu heshiiskii doorashada 2020 la leeyahay cidda leh dhaarinta xildhibaannada? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu heshiiskii doorashada 2020 la leeyahay cidda leh dhaarinta xildhibaannada?
Muxuu heshiiskii doorashada 2020 la leeyahay cidda leh dhaarinta xildhibaannada?
Muqdisho (Caasimada Online) – Doodo xoog leh iyo heshiisyadii doorashada dib loo akhriyo ayaa ka dhalatay go’aankii ay Axmed Qoor qoor iyo Cabdicasiis Laftagareen uga hor yimaadeen jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal, kaas lagu cadeeyey qorshaha soo xareynta xildhibaanada cusub.
Guddiga doorashada ee heer federaal ayaa jadwalkiisa ku cadeeyey waqtiga dhammeystirka doorashada, shahaado-siinta xildhibaannada cusub iyo dhaarinta dhamaan xubnaha labada Aqalka ee baarlamaanka oo la qorsheeyey inay dhacdo 14-ka bisha soocota ee April.
Sidoo kale xafladda dhaarinta xildhibaanada waxaa qabana xafiiska ra’iisul wasaaraha, sida ku cad jadwalka guddiga heer federaal.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxay ka hor yimaadeen jawdalka guddiga, iyagoo ku dooday in jadwaalkaas aan laga talo-gelin, sidoo kale waxay sheegeen in Ra’iisul wasaaraha iyo guddiga doorashada midkoodna uusan awood u laheyn howsha soo xareynta iyo dhaarinta baarlamaanka.
HOOS KA AKHRISO QODOBADA LAGU DHISAY GUDDIGA FEIT iyo waajibaadkiisa:
3. Guddigu waxay go’aanada ku gaarayaan cod hal dheeri ah. Xilalka iyo Waajibaadka Guddiga Hirgalinta Doorashada ee Heer Federaal ee 2020/20211. Guddiga GHDHF waxa uu mas’uul ka yahay guud ahaan kormeerka hannaanka doorashada iyo xaqiijinta in ay si isku mid ah u dhacdo. Guddiga GHDHF waa hay’adda ugu sarreysa ee kormeerka iyo hagidda hannaanka doorashada ee 2020/2021.2. Guddigu wuxuu qorsheynayaa isla markaana hagayaa habka Doorashada dalku u dhacayso.3. Guddigu wuxuu dajinayaa miisaaniyadda doorashada wuxuuna u maamulayaa si waafaqsan nidaamka maaliyadeed ee dalka.